Ukusikwa kwe-laser yengubo yangaphantsi yodayi eprintiweyo kunye namalaphu - I-Laser yegolide
Ukusikwa kweLaser yeZinto ezingaphantsi
Ukusetyenziswa kweeMatshini zeLaser ze-CO2 zeCandelo elingelilo Metal
Ukusikwa kwe-laser yengubo yangaphantsi yokudaya kunye neendwangu
Kule mihla itekhnoloji yokuprinta isetyenziswa ngokubanzi kumashishini ahlukeneyo njengempahla yezemidlalo, iilokhwe, impahla, ibhena, iiflegi kunye neempawu ezithambileyo. Inkqubo yokushicilela kwamalaphu ephezulu yanamhlanje ifuna nezisombululo zokusika ngokukhawuleza. Sesiphi esona sisombululo sisemgangathweni sokusika amalaphu kunye namalaphu? Ukucheba ngesandla ngokwendalo okanye ukusika oomatshini kunemida emininzi. Ukusikwa kweLaser kwesona sisombululo sithandwayo
Umbono wokusika i-Laser Solution
Isisombululo siyazenzekela kwinkqubo yokusika udweliso lwedayi oluprintiweyo lwendwangu okanye ilaphu ngokukhawuleza nangokuchanekileyo, kulungiswa ngokuzenzekelayo nakuphi na ukugqobhoza okanye woluleko olwenzekayo kwilaphu elingaqengqelekiyo okanye elinolisekileyo.
Iikhamera ziskena amalaphu, zifumane kwaye zichonge i-contour eprintiweyo, okanye khetha amanqaku obhaliso ashicilelweyo kwaye umatshini we-laser usika uyilo olukhethiweyo. Yonke inkqubo izenzekelayo.
UMBONO WENDLELA YOKUSETYENZISWA KOMGANGATHO WENKQUBO EMBINI
Le nkqubo yombono inamandla okukhangela ngokukhawuleza into eprintiweyo ebhedini yokucheba kwaye ngokuzenzekelayo yenza i-vector yokusika. Akukho sidingo sokwenza uyilo olusikiweyo, thumela nje nakuphi na uyilo lwesayizi nakweyiphi na iodolo kwaye uvelise iibhanile ezisikwe ngokugqibeleleyo, iiflegi okanye izinto zengubo ezinomgangatho otywiniweyo.
Amanqaku okubhaliswa kwescreen
Inkqubo yokuqonda ikhamera isetyenziselwa ukukhomba amanqaku obhaliso ashicilelwe kwinto yakho. Amanqaku anokufundwa ngokuchanekileyo yinkqubo ye-laser yethu kunye nenqanaba, ubungakanani kunye nokuphambuka kwezinto eziphrintiweyo ziya kuhlawulwa ngenxa yohlalutyo lobuchule bamanqaku obhaliso.
Ukusetyenziswa kweLaser Cutting Sublimation Imibhalo eprintiweyo kunye neendwangu
Impahla yezemidlalo kunye neengubo ezishicilelweyo, izihlangu, iimpahla zasekhaya
Inkqubo yokuSika i-Laser ilungele ukusika iimpahla zemidlalo ngokukodwa ngenxa yokubanako ukusika izinto ezilula nezilahlekisayo ngokuchanekileyo-uhlobo oluhlobo lweempahla zemidlalo (umz. Iimpahla zokuhamba ngebhayisikile, izixhobo zohambo, ijezi, iitshixu, imilenze, ukunxiba okusebenzayo njl. Njl.)
Ilogo encinci, ileta, inombolo kunye nezinto ezichaziweyo ezichaziweyo
Umsiki we-laser usebenzisa amanqaku obhaliso, kwaye isoftware yeGoldCAM ngaphakathi komsiki we-laser inomsebenzi wokufumana isaphulelo, onokuthi uqonde ngokuzenzekelayo uluhlu olungahambelaniyo kwizixhobo zokuhambisa udayi.
Izitshisi, iiflegi, igrafikhi enkulu kunye neempawu ezithambileyo
Esi sisombululo se-laser senzelwe ngokukodwa ishishini lokushicilela ledijithali. Inikezela izakhono ezingafakwanga zokugqiba iifomathi ezibanzi ezishicilelweyo okanye ezihonjisiweyo zedayi kunye nemigca ethambileyo enobubanzi obulungiselelwe ukusika kunye nobude.
JONGA IMISEBENZI YOKUGQIBELA EBALASELEKILEYO YOKUZONWABISA IIFABRIKI NEZIFUNDO ZENGCACISO
Umbono wokuSkena umatshini wokusika i-Laser
Umatshini oMbini wokuSika iiNtloko ze-Laser
Ukubhaliswa kweKhamera yokuSusa iMatshini
Umatshini omkhulu wokusika umatshini weLaser weSignage